ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကို တရုတ်အစိုးရပိုင် CITIC Construction နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး? - Yangon Media Group
ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကို တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရပိုင် စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော CITIC Construction နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလျက်ရှိကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာ စီးပွားရေး အများပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိ တက်(MAPCO)၏ဥက္ကဋ္ဌဦးချစ် ခိုင်က ပြောသည်။ ဒီဇင်ဘာ၂၈ရက်ကရန်ကုန် မြို့၊ ကုန်သည်စက်မှုအသင်းချုပ်၌ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် မြန်မာနိုင်ငံ လယ်ယာ စီးပွားရေးအများပိုင် ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO)အထူးအထွေထွေ အစည်းအဝေးနှင့် နှစ်ပတ်လည်အထွေထွေအ စည်းအဝေးအဖွင့်အမှာစကားတွင်ထည့်သွင်းပြောခြင်းဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွား ရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက် (MAPCO) ၏ဥက္ကဋ္ဌဦးချစ်ခိုင်က ” Mitsui နဲ့မလုပ်ဖြစ်ခဲ့ တဲ့ တွံတေးဆန်စက်ကို ကျွန်တော်တို့ဘာသာ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး တွံတေးအပါအဝင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကို တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အစိုးရပိုင်စီးပွား ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ CITIC Construction နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်း ဆွေးနွေးလျက်ရှိပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံက Mitsui နဲ့ဆန်စပါးလုပ်ငန်းကိုပူးပေါင်းပြီး jointventure မလုပ်ဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ဓာတ် မြေသြဇာ ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရောင်းချတဲ့ လုပ်ငန်းကိုတော့ Mitsui အပါအဝင်ဂျာမနီနိုင်ငံမှ Benh Meyer တို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟုပြောသည်။
တွံတေး (IRCR) စီမံကိန်းရင်း နှီးမြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် MAPCO နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ MITSUI & Co. တို့ပူးပေါင်း၍ Myanmar Japan Rice Industry Company Limited အနေဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ကော်မရှင်ခွင့်ပြုမိန့်ကို၂ဝ၁၅ခုနှစ် ဧပြီလ၂၇ရက်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအရည်အသွေး အဆင့်အတန်းမီ Integrated Rice Complex အဖြစ်ရည်မှန်းချက်ထား ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း MITSUI & Co. အနေဖြင့်မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ဆန်စပါးလုပ်ငန်းတွင် ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ် ပါဝင်စားမှုမရှိတော့သဖြင့် လုပ် ငန်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သဘောတူစာ ချုပ်ကိုချုပ်ဆိုနိုင်ခြင်း မရှိတော့ဘဲ MAPCO မှစီမံကိန်းကို တစ်ဦး တည်းဆက်လက် ကြိုးပမ်းဆောင် ရွက်လျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံလယ်ယာစီးပွား ရေးအများပိုင်ကော်ပိုရေးရှင်းလိမိတက် (MAPCO) ၏အုပ်ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဦးရဲမင်းအောင်က ”တွံ တေး IRCP စီမံကိန်းကိုစိတ်ဝင်စား တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရပိုင် CITIC Construction Group နဲ့ပူးပေါင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆက်လက်ဆောင် ရွက်သွားဖို့ နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းလျက် ရှိပါတယ်။ တွံတေး IRCP စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းမှာ မြေ ပြုပြင်ခြင်း၊ ကုန်တင်ကုန်ချဆိပ်ခံတံတား၊ ကုန်ထုတ်လမ်းနဲ့သို လှောင်ရုံ၊ ဆန်စက်အဆောက်အအုံ Civil Work လုပ်ငန်းတွေကို တည် ဆောက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါတယ်။အ ဆောက်အအုံတွေအတွက် Steel Structure တွေတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ၇ဝရာခိုင်နှုန်းခန့် ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဆောက်အဦတွေတည် ဆောက်ပြီးစီးပါက အခြောက်ခံ စက်တပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဆင့် မြင့် SATAKE ဆန်စက်တပ်ဆင် ခြင်းလုပ်ငန်းတို့ကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
တွံတေး (IRCP) စီမံကိန်း၏ စက်မှုမြေငှားဂရန်ခွင့်ပြုမိန့်ကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် ဧပြီလ ၃ ရက်တွင် ရရှိခဲ့ပြီး ယင်းစီမံကိန်းကိုလာမည့် ၂ဝ၁၉ ခုနှစ်အတွင်း လုပ်ငန်း စတင်လည်ပတ်နိုင်ရန်ရည်မှန်း ထားရှိကြောင်းသိရသည်။
မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အသင်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကျော်ကိုကို ထိုင်းလိဂ် ဆာမက်ပရာကန် အသင်းသို့ တ??
သတိပေးမှုများ ရှိနေသော်လည်း အာတိတ်ဒေသတွင် ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ရေပေါ်နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းဖိုကို ရုရှား စတင်မိတ်ဆက်
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် နှစ်လရှည်ကြာ ဂိမ်းလောင်းကစားဆိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော်လည်း ဖမ်းဆီးမိမှုမရ